Paul Scholes: "Dhammaan Shaqaalaha Tababarka Manchester United Waxay Ahayd Inay Albaabka Ka Baxaan"
HomeWararka CiyaarahaPaul Scholes: “Dhammaan shaqaalaha tababarka Manchester United waxay ahayd inay Albaabka ka baxaan”
Paul Scholes: “Dhammaan shaqaalaha tababarka Manchester United waxay ahayd inay Albaabka ka baxaan”
Ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee Manchester United Paul Scholes ayaa sheegay in dhamaan shaqaalaha tababarka ee Old Trafford ay aheyd inay kooxda ka tagaan markii Ole Gunnar Solskjaer uu baxayay.
Solskjaer ayaa laga xayuubiyay shaqadiisa tababarenimo isbuucaan ka dib qaab ciyaareedkiisa liitay, laakiin Michael Carrick ayaa loo dhiibay hogaanka kooxda koowaad, iyadoo Kieran McKenna iyo Mike Phelan ay taageerayaan ciyaaryahankii hore ee khadka dhexe ee kooxda.
Si kastaba ha ahaatee, Scholes ayaa sheegay in Carrick, McKenna iyo Phelan ay ahayd inay sidoo kale la baxaan Solskjaer, iyadoo dhammaan shaqaalaha tababarka ay mas’uul ka yihiin kubad xumadii kooxda
“Waxaan ka hadalnaa dadka kor ku xusan,” Scholes ayaa u sheegay BT Sport . “Afar usbuuc ka hor ciyaartaas Liverpool ka dib, waxay ahayd markii aan ogaanay in Ole uu tagi doono,
“Marka dadka kor ku xusan waxay u baahdeen inay diyaariyaan maareeyaha soo socda iyo qaybta xigta ee shaqaalaha, waxaan ku dhawaaday inaan ka xishoon lahaa inaan ka mid noqdo shaqaalaha hadda, wixii ku dhacay Ole ka dib, dhammaantood waxay ahayd inay tagaan, haddii la eryo iyo haddii kale. sababtoo ah waxay ka mid ahaayeen kooxda Ole.
Man United ayaa lagu soo waramayaa in ay wadahadalo kula jirtay tababarihii hore ee kooxda Barcelona ee Ernesto Valverde kaas oo ku saabsanaa in uu si ku meel gaar ah u maamulo Old Trafford.